मत्ती १७ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१७ छ दिनपछि पत्रुस, याकूब र तिनको भाइ यूहन्नालाई येशूले एउटा अग्लो डाँडामा लैजानुभयो र त्यहाँ तिनीहरूबाहेक अरू कोही थिएन। २ तब तिनीहरूको अगाडि उहाँको रूप परिवर्तन भयो र उहाँको मुहार सूर्यजस्तै उज्यालो र लुगाचाहिं ज्योतिजस्तै चहकिलो भयो। ३ अनि हेर, तिनीहरूसामु मोशा र एलिया उहाँसित कुराकानी गरिरहेको देखियो। ४ तब पत्रुसले येशूलाई भने: “प्रभु, हामी यहीं बस्नु उचित हुन्छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म यहाँ तीन वटा पाल टाँग्नेछु, एउटा तपाईंको लागि, एउटा मोशाको लागि अनि एउटा एलियाको लागि।” ५ तिनी बोल्दै गर्दा हेर, चहकिलो बादलले तिनीहरूलाई ढाक्यो अनि हेर, बादलबाट यस्तो आवाज आयो: “यिनी मेरो प्यारो छोरा हुन्‌, जससित म अति प्रसन्न छु; तिमीहरूले उनको कुरा सुन।” ६ यो सुनेर चेलाहरू घोप्टो परे अनि असाध्यै डराए। ७ तब नजिकै गएर येशूले तिनीहरूलाई छुँदै भन्नुभयो: “नडराओ, उठ।” ८ तिनीहरूले आफ्नो टाउको उठाएर हेर्दा येशूबाहेक अरू कसैलाई देखेनन्‌। ९ अनि डाँडाबाट ओर्लंदै गर्दा येशूले तिनीहरूलाई यस्तो आज्ञा दिनुभयो: “मानिसको छोरालाई मृत्युबाट नब्यूँताइएसम्म यस दर्शनबारे कसैलाई नभन्नू।” १० तर चेलाहरूले उहाँलाई प्रश्न गरे: “त्यसोभए, पहिला एलिया आउन आवश्यक छ भनेर शास्त्रीहरू किन भन्छन्‌ त?” ११ उहाँले जवाफ दिनुभयो: “एलिया पक्कै पहिला आउनेछन्‌ र सबै कुरा पुनर्स्थापना गर्नेछन्‌। १२ तर म तिमीहरूलाई भन्छु, एलिया आइसकेका छन्‌। तैपनि तिनीहरूले उनलाई चिन्न सकेनन्‌ र उनीसित मनपरी व्यवहार गरे। मानिसको छोराले पनि यसरी नै तिनीहरूको हातबाट निश्चय दुःख भोग्नेछ।” १३ बप्तिस्मा गराउने यूहन्नाको विषयमा उहाँले बताउनुभएको रहेछ भनेर तब चेलाहरूले बुझे। १४ अनि उहाँहरू भीडको नजिकै पुग्दा एक जना मानिस उहाँकहाँ आयो र घुँडा टेकेर यसो भन्न थाल्यो: १५ “प्रभु, मेरो छोरामाथि कृपा देखाउनुहोस् किनभने छारे रोग लागेर उसले साह्रै दुःख पाएको छ। ऊ कहिले आगोमा त कहिले पानीमा घरीघरी खसिरहन्छ। १६ मैले उसलाई तपाईंका चेलाहरूकहाँ लगें तर उनीहरूले उसलाई निको पार्न सकेनन्‌।” १७ तब येशूले भन्नुभयो: “ए विश्वास नभएको, टेढो पुस्ता, म तिमीहरूसित कतिन्जेल रहूँ? म तिमीहरूलाई कतिन्जेल सहूँ? खै, उसलाई यता मकहाँ ल्याओ।” १८ अनि येशूले दुष्ट स्वर्गदूतलाई हप्काउनुभयो र त्यस केटोबाट त्यो निस्क्यो अनि उत्तिखेरै ऊ निको भइहाल्यो। १९ त्यसपछि चेलाहरू सुटुक्क येशूकहाँ आएर सोधे: “हामीले किन त्यसलाई धपाउन सकेनौं?” २० उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूसित विश्वास थोरै भएकोले। किनकि म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, यदि तिमीहरूसित रायोको गेडा जत्रो मात्र विश्वास छ भने पनि तिमीहरूले यस डाँडालाई ‘यहाँबाट त्यहाँ सरिजा’ भन्यौ भने त्यो सरिजानेछ र तिमीहरूको लागि कुनै कुरा असम्भव हुनेछैन।” २१ * — २२ गालीलमा भेला भएको बेला येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मानिसको छोरालाई निश्चय नै धोका दिइनेछ अनि मानिसहरूको हातमा सुम्पिइनेछ २३ र तिनीहरूले उसलाई मार्नेछन्‌ अनि तेस्रो दिनमा उसलाई ब्यूँताइनेछ।” यो सुनेर तिनीहरू अत्यन्तै दुःखी भए। २४ उहाँहरू कफर्नहुममा पुगेपछि मन्दिरको कर* उठाउने मानिसहरू पत्रुसकहाँ आएर सोधे: “के तिमीहरूका गुरुले मन्दिरको कर तिर्नुहुन्न?” २५ तिनले भने: “तिर्नुहुन्छ।” तर जब तिनी घरभित्र पसे, तब पहिला येशूले सोधिहाल्नुभयो: “तिमीलाई कस्तो लाग्छ, सिमोन? पृथ्वीका राजाहरूले राजस्व वा कर* कसबाट उठाउँछन्‌? आफ्ना छोराहरूबाट कि पराईबाट?” २६ जब तिनले “पराईबाट” भने, तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “उसोभए छोराहरूले त कर तिर्नु नपर्ने रहेछ। २७ तर हामीले गर्दा तिनीहरूलाई ठेस नलागोस्। त्यसैले तिमी समुद्रमा जाऊ र बल्छी हान अनि बल्छीमा परेको पहिलो माछा लेऊ। तिमीले त्यसको मुख खोल्दा चाँदीको एउटा सिक्का* भेट्टाउनेछौ। त्यो लिएर मेरो र तिम्रोतर्फबाट तिनीहरूलाई तिरिदेऊ।”
^ मत्ती १७:२१ * विभिन्न प्रमुख पुराना ग्रीक पाण्डुलिपिहरूमा यो पद पाइँदैन; तर बाइबलका केही अनुवादहरूमा भने यस पदमा यस्तो लेखिएको छ: “तर यस किसिमको चाहिं प्रार्थना र उपवासविना निस्कँदैन।” (मर्कू ९:२९ तुलना गर्नुहोस्।)
^ मत्ती १७:२४ * शाब्दिक, “दुई ड्राक्माको सिक्का,” अर्थात्‌ दुई दिनको ज्याला।
^ मत्ती १७:२५ * शाब्दिक, “टाउकोको कर।” यसले प्रत्येक व्यक्तिमाथि लगाइएको करलाई बुझाउँछ।
^ मत्ती १७:२७ * शाब्दिक, “एक स्टेटरको सिक्का,” जुन चार ड्राक्मा बराबर हुन्छ।